အန်တီရှမ်းမ | CeleTrend
ကျွန်တော်တို့မှာမိသားစုလေးယောက်ရှိပါတယ် အမေရယ်အမရယ်အဒေါ်ရယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်သူလယ်သမားတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆယ်တန်းတက်နေတဲ့အချိန် တစ်နေ့တော့တောင်းကြီးကကျောက်ပွဲစားရှမ်းမတစ်ယောက်အိမ်ကိုရောက်လာတယ်ဗျအမေ့မိတ်ဆွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့ကိုအန်တီရှမ်းမလို့ပဲခေါ်တယ်အန်တီဆိုပေမယ့်လဲအသက်က၃၀ဝန်းကျင်လောက်တစ်နေ့တော့ကျွန်တော်ကျောင်းပိတ်ရက်မှာဈာက်နေချိန်မှာအန်တီရှမ်းမကရေချိုးပြီးအိမ်ပေါ်ထပ်ကိုတက်လာပြီးအခန်းထဲမှာအင်္ကျီလဲတာပေါ့
ကျွန်တော့အခန်းနဲ့က ကပ်နေတာဗျကျွန်တော်လဲလူပျိုပေါက်အရွယ်ဆိုတော့လဲကာမစိတ်လေးတွေရှိတာပေါ့ဗျာအဲတာနဲ့ကျွန်တော်ချောင်းကြည့်ချင်စိတ်ပေါ်လာတယ်အခန်းကလဲထရံကာဆိုတော့ကျွန်တော်လဲချောင်းကြည့်ဖြစ်တယ်ဗျအန်တီရှမ်းမကဗျာသူထမိန်လေးကိုရင်လျှားထားရာကနေအောက်ကိုလျှောဝတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော့စိတ်ထဲမှာလန့်သလိုလိုဖြစ်သွားတယ် သူနို့တွေကလုံးပြီးဖွေးနေတာပဲဗျာကျွန်တော်လီးကတောင်နေပြီသူကဆက်ပြီးတော့အောက်ခံဘောင်းဘီလေးဝတ်ပြန်ရောဝတ်ပြီးထမိန်လေးဖြေချလိုက်တာဗျာကျွန်တော်လဲကြည့်ပြီးထုချင်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ပိုစိုးတာကသူကဘောင်းဘီဝတ်ပြီတော့ဗျာသူ့အဖုတ်ထဲကိုပေါင်ဒါမုန့်တွေပတ်နေတာဗျကျွန်တော်တော်လဲသူ့ကိုကြည့်ပြီးထုလိုက်တာတစ်ခါပြီးပြီသွားတယ်ဗျ
ကဲဗျတိုတိုနဲ့လိုရင်ပဲပြောတော့မယ် တစ်နေ့တော့ကျွန်တော်ကျောင်းသွားချိန်နောက်ကြသွားတယ် အိမ်ကလူတွေကလဲတောင်သူတွေဆိုတော့မနက်အစောစောအလုပ်သွားကြတယ်ပေါ့ ကျွန်တော်ကျောင်းသွားဖို့ကားစောင့်နေတာကားမရတော့ကျွန်တော်လဲအိမ်ပဲပြန်ခဲ့တော့တယ် အဲမှာစတာပဲဗျို့ အိမ်မှာကအန်တီရှမ်းမတစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့တာလေ ကျွန်တော်အိမ်ရှေ့ရောက်တော့အိမ်ကတံခါးတွေအကုန်ပိတ်ထားတယ်ဘာလို့ပါလိမ့်ပေါ့ကျွန်တော်အသံတွေကြားလို့ချောင်းကြည့်တော့ အန်တီရှမ်းမကတီဗွီရှေ့မှာဗျာအောကားတွေကြည့်ပြီးကားကားကြီးသူ့စောက်ပတ်လေးကိုလက်နဲ့ထိုးနေတာဗျ ကျွန်တော်လဲလီးကတောင်နေပြီလေအဲဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လဲဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့အသံပေးလိုက်တယ်
အန်တီရှမ်းမကပျာပျာသလဲတီဗွီနဲ့DVDစက်ကိုပိတ်လိုက်တယ် ပြီးတော့တ့ခါးတွေဖွင့်လိုက်တယ် ကျွန်တော်လီးကတောင်တုန်းပဲလေ ကျွန်တော့ကိုသားကျောင်းမသွားဘူးလားတဲ့ ဟုတ်ကားမမှီလို့ လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးအခန်းထဲဝင်ပြီးအဝတ်စားတွေလဲပြီး အပြင်ပြန်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်သိတာပေါ့ DVD စက်ထဲမှာအခုနကအန်တီရှမ်းမကြည့်လက်စအောကားခွေရှိသေးတယ်ဆိုတာအန်တီရှမ်းမကတုနတုန်ရင်ရင်ဖြစ်နေတယ် သူ့အောကားတွေကြည့်နေတာကျွန်တော်သိသွားပြီလားဆိုပြီး ကျွန်တော်ကတော့ခပ်တည်တည်ပဲနေပြီးသီချင်းနားထောင်အုံးမယ်ဆိုပြီးပြောတော့အန်တီရှမ်းမကသားနားမထောင်နဲ့တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးသားစာကျက်ရမယ့်အချိန်လေတဲ့ဘယ်ရမလဲကျွန်တော်ကမရ ရအောင်ဖွင့်လိုက်တော့ထွက်လာတဲ့အသံတွေက.
အားး အီးးးဘွတ် ဘွတ် အိုးအိုးဂျပန်မလေးဖင်ကုန်းပေးနေတာအန်တီရှမ်းမကအတင်းပြေးပိတ်တယ်လေအဲတာနဲ့ကျွန်တော်လဲမထူးဇာတ်ခင်းလိုက်တယ်အန်တီရှမ်းမအခုနကအောကားကြည့်ပြီးကိုယ့်ဘာသာလုပ်နေတာကျွန်တော်တွေ့တယ်ပြောလိုက်တော့အန်တီရှမ်းမလန့်သွားတယ် စားဘယ်သူ့မှပြန်မပြောပါနဲ့တဲ့မုန့်ဖိုးပေးမယ်တဲ့ပိုက်ဆံ၅၀၀၀ပေးတယ်ကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော်ကပိုက်ဆံမလိုချင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ပိုက်ဆံမလိုချင်ရင်သားကဘာလိုချင်တာလဲတဲ့ ကျွန်တော်လဲရဲရဲတင်းတင်းပြောလိုက်အန်တီရှမ်းမရဲ့စောက်ဖုတ်ကိုကိုင်ကြည့်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့ အဲတာတော့မရဘူးလို့သူကပြောတယ်မရရင်လဲနေပေါ့သူများတွေကိုလျှောက်ပြောလိုက်မယ်လို့ပြောတော့သူက အင်းဒါဆိုလဲကိုင်ဆိုပြီးသူ့ထမိန်ကိုလှန်ပေးတော့
ကျွန်တော့်လီးကတောင်လာတယ်လေ အန်တီရှမ်းမရဲ့စောက်ပတ်ကအခုနကအောကားကြည့်ထားတော့အရည်တွေထွက်နေတယ်လေ အန်တီအဲတာဘာအရည်တွေလဲလို့မေးတော့သူကစောက်ရည်လို့ပြောတယ် ဘာလိူ့ထွက်တာလဲလို့မေးတော့ခံချင်လို့ပေါ့တော့ သူကသားလိုးဘူးလားလို့မေတယ်ဟက့်အင်လို့ပြောလိုက်တော့ သားကိုအန်တီသင်ပေးမယ်တဲ့သားပုဆိုးချွတ်လိုက်တဲ့ ကျွန်တော်လဲပုဆိုးချွတ်ပေးလိုက်တော့အန်တီရှမ်းမက ဟယ်နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာ အန်တီရှမ်းမကကျွန်တော့်လီးကိုကိုင်ပြီးအန်တီစုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးစုပ်တော့တာပဲ ကျွန်တော်လဲတစ်ခါမှမခံဘူးတော့ အားးးး အားးးး အားးး ကောင်းလိုက်တာအန်တီရယ် ဘယ်လိုကြီးမှန်မသိဘူး အား အား အားအန်တီကျွန်တော်ပြီးတော့မယ်အား အားအားအား အင်းအင်းတော်ပြီအန်တီ တော်ပြီ အဲတာန်ဲအန်တီရှမ်းမကကျွန်တော်ကိုပြောတယ် သားနို့စို့ပေးပါလားတဲ့ကျွန်တော်အန်တီရှမ်းမနို့လေးတွေကိုစို့ပေးနေတယ်
အန်တီရှမ်မက အား အားသားရယ်ကောင်းလိုက်တာ အင်း အင်းအင်းကောင်းတယ်နာနာလေးစို့တဲ့သား အန်တီသားလိုးချင်ပြီလို့ပြောလိုက်တော့ အန်တီရှမ်းမကသားလိုးချင်ရင်လိုးတော့လေဆိုပြီးပတ်လက်လှန်ပြီးပေါင်ကားပေးတယ် အန်တီရှမ်းကကျွန်တော့်လိ်ီးကြီးကိုကိုင်ပြီးသူ့စောက်ပတ်ဝကိုတေ့ပေးတော့ကျွန်တော်လဲဆောင့်ချလိုက်အန်တီရှမ်းကအော်လိုက်တာ အားးးးနာလိုက်အဲလောက်တောင်ဆောင့်ရလားတဲ့က်ှန်တော်ကအရိုင်းဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်တဲ့အဲတာနဲ့ကျွန်တော်လဲတစ်ချက်ခြင်းမှန်မှန်လေးလိုးနေတော့အန်တီရှမ်းမကကောင်းလိုက်တာသားရယ်
အားး အား အားးး အားး သားကောင်းတယ် ကောင်းတးလိုက်သားရယ် ဆောင့်ပါတော့ အားးး နာနာလေးဆောင့်ပေးပါ အန်တီစောက်ပတ်ကွဲသွားပါစေ. ဆောင့်ပေး အင်းး အင်းး အားး အားး လိုးပါ မြန်မြန်လိုးပေးပါသားရယ်သားလီးကြိ်းကကောင်းလိုက် ဖွတ် ဖွတ် ဘွတ်ဘွတ် အုအု အု အား အားသားလိုးတာကောင်းလားအန်တီရှမ်းမ ကောင်းတယ် လိုးပါမြန်အြန်လေးလိုးပေးပါ အန်တီကကျွန်တော်လိုးတာအားမရလို့ ထင်တယ်သား အောက်ကနေဆိုပြီး အပေါ်ကနေတက်ဆောင့်တော့တာပဲ အားအား အား အန်တီ အားး ကောင်းလားသားအန်တီလိုးပေးတာ ကောင်းတယ်အန်တီ အား အား အား အား အု အု အု အု အု ဘွတ် ဘွတ် ပတ် ပတ် အန်တီ ရှမ်းမ ကုန်းပေးပါလားလို့ပြောတော့ သားစိတ်ုကိုက်အတိုင်းပဲဆိုပြီး ကုန်ပေးတယ်
ကျွန်တော်လဲနောက်ကနေအားကုန်စောင့်ပေးလိုက်တာ ကောင်းလိုက်တာသားရယ် သားကအရမ်းလိုးနိုင်တာပဲလူနဲ့မလိုက်ဘူးတဲ့ ဆောင့်သားအန်တီပြီးတော့မယ် ဆောင့် ဆောင့် သား နာနာလေးဆောင့် ပေး အား အား အား အား အ. အ အ အ အင်း အင်းကောင်းတယ်သား အားအား အင်း ကောင်းလိုက်တာသားရယ် အန်တီပြီးတော့မယ် အား အား အင်း အင်းပြီးပြီ ပြီးပြီသား ကျွန်တော်လဲအန်တီရှမ်းမကိုအချက်နှစ်ဆယ်လောက်စောင့်ပြီး အားအား အားးးးးးအန်တီပြီးပြီသွားပြီသား ကျွန်တော်လဲပြီး ပြီဆိုပြီအန်တီရှမ်းမစောက်ပတ်ထဲကိုလက်ရည်တွေ ပန်ထည့်လိုက်ပြီး နှစ်ယောက်သားဖက်ပြီးမှိန်းနေ တော့အန်တီရှမ်းမက တိုးတိုးလေး ပြောတယ်သားက အရမ်းလိုးတက်တာပဲတဲ့ သားကိုချစ်မိသွားပြီတဲ့ နောက်နေ့ကျွန်တော်ကျောင်းသွားပြီးပြန်လာတော့အန်တီရှမ်းမ ပြန်သွားပြီတဲ့ကျွန်တော်လဲအန်တီရှမ်းမပြန်လာတာကိုစောင့်နေတာအခုထိပါပဲ…… …… ပြီးပါပြီ…..